Safal Khabar - कोरोनाविरुद्ध लड्न विश्व स्वास्थ्य संगठनका पाँच सुझाव : पौष्टिक आहार खाऔँ, गुलियो नखाऔँ, धुमपान नगरौँ, व्यायाम गरौँ, किताब पढौँ
कोरोनाविरुद्ध लड्न विश्व स्वास्थ्य संगठनका पाँच सुझाव : पौष्टिक आहार खाऔँ, गुलियो नखाऔँ, धुमपान नगरौँ, व्यायाम गरौँ, किताब पढौँ
बिहिबार, १३ चैत २०७६, १२ : २३
एजेन्सी । विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) विरुद्ध लड्न विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले पाँच वटा सुझाव दिएको छ ।
१) स्वस्थ र पौष्टिक आहार खानुहोस्। जसले तपाईँको रोग प्रतिरक्षा प्रणालीलाई ठीकसंग कार्य गर्न सहयोग गर्दछ ।
२) मदिराजन्य पदार्थको सेवनलाई सीमितमा राख्नुहोस् । गुलिया पेय पदार्थहरु नलिनुहोस् ।
३) धूमपान नगर्नुहोस् । यदि तपाईँ कोरोना भाइरस (कोभिड१९) बाट संक्रमित हुनु भयो भने धूमपानले गम्भीर रोगको जोखिम बढाउन सक्छ ।
४) शारीरिक व्यायम गर्नुहोस् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डले भने झैँ बयस्कहरुले दैनिक कम्तिमा ३० मिनेट र बच्चाहरुलाई दैनिक १ घण्टा शारीरिक व्यायम गर्न गराउनुहोस् । यदि तपाईँलाई यो बेला नियमक निकायले अनुमति दिएको छ भने बाहिर पैदल यात्रा गर्नुहोस, दौडनु होस, सवारीमा समेत जानुहोस तर अरुसंगको दूरी राख्नुहोस । यदि तपाईँ घरभित्रै लकडाउन अर्थात बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था छैन् भने व्यायम गर्नुहोस्, नाच्नुहोस्। योगा गर्नुहोस् ।
घरमै बस्नु भएको छ, काम गरिराख्नु भएको छ भने लामो समय एउटै आसनमा नरहनुहोस् । तपाईँले कम्तीमा हरेक ३० मिनेटमा ब्रेक लिनुहोस् । घरमा कसरी स्वस्थ रहेर बस्ने भन्ने बारेमा हामी आउने दिनमा पनि सल्लाह दिनेछौँ ।
५) तपाँईको मानसिक स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नुहोस् । यो संकटको बेला तनाव, अलमल र डराउनु सामान्य कुरा हो । यस्तो बेलामा तपाईँले आफ्ना चिनजान र विश्वासिला व्यक्तिसंग कुरा गर्नुहोस् । संगीत सुन्नुहोस, किताब पढनुहोस् अथवा गेम खेल्नुहोस् ।
शनिबार, २२ चैत २०७६, ११ : ०५ मा अद्यावधिक गरिएको
कोरियामा रहेका नेपालीहरुलाई सावधानी अपनाउन दूतावासको आग्रह
दक्षिण कोरियाको सियोलस्थित नेपाली दूतावासले दक्षिण कोरियामा कोरोना संक्रमणदर केही दिनदेखि बढिरहेका बेला त्यहाँस्थित नेपालीहरुलाई...
कोरोना भाइरसको आशंका गरिएका एक बिरामी टेकु अस्पतालबाट फरार
कोरोना भाइरसको आशंका गरिएका एक बिरामी टेकु...
कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएकी एक विरामीलाई सफलतापूर्वक निको पारेका थाईल्याण्डका चिकित्सकको भनाई
थाईल्याण्डका चिकित्सकले आफूहरुले वुहान कोरोना भाइरसबाट संक्रमित...
नेपाल पनि ‘कोरोना’ भाईरस संक्रमणको जोखिममा, यसको लक्षण र यसबाट कसरी जोगिने ?
चीनबाट देखा परेको नयाँ भाइरस कोरोनाको संक्रमण...
१. होम क्वारेन्टाईन पुरा गरेको भन्दै ९ जनालाई गाँउपालिकाले दियो नगद १ हजार
२. ‘प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै क्याम्प भित्र यसरी परे घेराबन्दीमा’
३. कोरोनाको आशंकामा होम क्वारेन्टाईनमा राखिएको एक भारतियले गरे फाँसी लगाएर आत्महत्या
४. भारतको विभिन्न शहरबाट फकिएका ९ जनामा गरिएको कोरोना परिक्षणको नतिजा नेगटिभ
५. बहराइनमा ९ नेपालीलाई कोरोना संक्रमण
६. प्रशासकीय अधिकृत नै क्वारेन्टाइनमा बस्न न्नमानेपछि...
७. भरतपुर अस्पतालमा मृत्यु भएकी युवतीको नतिजा नेगेटिभ
८. अमेरिकामा एकै दिनमा कोरोनाले १ हजार ४ सय जनाको ज्यान लियो
९. फेरि लकडाउन समय थप्न सुझाव